Mooshin ka dhan ah Wasiir katirsan Xukuumadda Soomaaliya loo gudbiyey Guddoonka baarlamaanka.
MUQDISHO(P-TIMES)- Mudanayaal katirsan baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya ayaa u xaqiijiyey Warsidaha PuntlandTimes in kalfadhiga baarlamaanka ee maanta furmaya durba mooshin laga gudbiyey Wasiir katirsan Xukuumadda Faderaalka Soomaaliya, kaas oo lagu eedeeyey ku tumashada qodobo Dastuuri ah oo ka mid ah kuwa dalka.
Wasiirka Gaadiidka & Duulista Hawada ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Oomaar oo lahaa amaradii lagu xanibayay duulimaadyada JUbbaland ayaa la sheegay in uu yahay shaqsiga laga gudbiyey mooshinkan, isagoo laga sugayo in uu iska difaaco ama ugu yaraan uu xilkiisa ku waayo.
Xildhibaan Maxamed Idriis ganey ayaa gudbiyey Mooshinka Wasiirka Gaadiidka & Duulista Hawada ee Max’ed Cabdullahi OOmaar dhan ah, wuuxu shegay in ay la gaari doonaan xilka qaadista oo ay sharciga la tiigsanayaan.
Xildhibaanada Mooshinka keeney ayaa lagu waramayaa in ay doonayaan in kalsoonida ay kala noqdaa Wasiirka waxaana lagu eedeeyey kutumasho Qodobo Dastuuri ah.